ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ကြားရမည့် မှတ်ချက်များကို ထရိတ်ဒါများက အသည်းအသန်ဂရုစိုက်နားစွင့်နေကြပါသည်. အများက မျှော်လင့်နေကြသည်မှာ လာမည့်စက်တင်ဘာ သို့ အောက်တိုဘာလတွင် ငွေတိုက်စာချုပ်များကို ယူရို ၂. ၃ထရီလျှံဖိုးအထိ ၀ယ်ယူမည့်အကြောင်းကို ဘာသံကြားရမလဲ နားစွင့်နေကြတာဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့် စက်တင်ဘာ ၇၇က်နေ့တွင် ထုတ်ြပန်မည့် ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲကို သတိထားစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါသည်.
၁၄:၄၅တွင် အတိုးနှုန်းကိုကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၁၅:၃၀MTအချိန်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်. ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲ Mario Draghi ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုဖြေလျော့ပေး မပေးဆိုတာကို အရိပ်အမြွက်သိရဖို့အတွက် ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရောင်းအ၀ယ်သမားများကစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်.
02.08.2018 11:51 အမေရိကန် Nonfarm လုပ်ခလစာ
အမေရိကန် လယ်ယာမဟုတ်သော လုပ်ခလစာများသည် အရေးကြီးဆုံး စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းများထဲမှ